China Capsule Bottle PET Green fekitori uye vagadziri | Qianduo kavha
Wuxi Qianduo Packaging Technology Co, Ltd.
Capsule Bhodhoro PET Chena
Kamudzira Bhodhoro HDPE CFB-25
Capsule Bhodhoro PET Tsvuku
Capsule Bhodhoro PET Green
Capsule Bhodhoro PET Brown
Mazuva ano, vanhu vazhinji vanozofunga nezve chena kekutanga kana vachisarudza vara remabhodhoro epurasitiki. Muchena unonyatsoita basa uye unogona kuenzaniswa nechero rimwe ruvara. Nekudaro, vanhu vazhinji vanotarisira kuti ruvara rwechigadzirwa kurongedza richava rinoshanda uye rakapfuma. Girinhi zvakare rakajairika ruvara uye rinotaridzika zvakanyanya kugadzikana. Vazhinji vanhu vanofarira iyo nyowani uye yechisikirwo hwema hwegirinhi, asi zvinonetsa kubata iyo collocation yemuvara kunze kwegirini mumabhodhoro epurasitiki.
Mazuva ano, vanhu vazhinji vanozofunga nezve chena kekutanga kana vachisarudza vara remabhodhoro epurasitiki. Muchena unonyatsoita basa uye unogona kuenzaniswa nechero rimwe ruvara. Nekudaro, vanhu vazhinji vanotarisira kuti ruvara rwechigadzirwa kurongedza richava rinoshanda uye rakapfuma. Girinhi zvakare rakajairika ruvara uye rinotaridzika zvakanyanya kugadzikana. Vazhinji vanhu vanofarira iyo nyowani uye yechisikirwo hwema hwegirinhi, asi zvinonetsa kubata iyo collocation yemuvara kunze kwegirini mumabhodhoro epurasitiki. Mune iwo mavara anoenderana emabhodhoro ekupakata uye zvinyorwa, vanhu vazhinji vanosarudza kuenderana zvinoenderana nezvavanoda kuzviisa pasi. Zvinogona kutaurwa kuti "radish uye miriwo zvine zvavanoda ivo", uye vashandisi vanosarudza yega yega ruvara. Nekudaro, pane fungidziro yezvatinoda isu, tinofanirwa kufunga nezvekunaka uye kunyaradzwa.
Chikafu cheGiredhiMugadziri 10cc 50cc 100cc 150cc 250cc 300cc Hamuna chinhu PET Pe HDPE Plastic White Opaque Piritsi Bhodhoro
Ethylene oxide inouraya mabhakitiriya
Ruvara rwakaita sei rwakasvibira?
Pakati pemavara ese, girini ndiyo yakanyanya kuomarara kuenzanisa. Mutambo wakanaka uchaita kuti hombodo yekumhara ive nehupenyu, hudiki uye ine hupenyu, iine simba rakasimba kwazvo rehunhu hutsva. Kana mutambo wacho usina kunaka, zviri nyore kuti uve wakashata. Girinhi inonyanya kukodzera kumavara anotevera: - 1, chena: girini nemuchena izuva, kuitira kuti pasi, unzwe wakachena, wakajeka, wakanaka, uye kune makore machena, pasi pegirini; 2, nhema: girini yakajeka ndeyayo yerima color system, uye nhema zvakare ndeyerima color system. Naizvozvo, maviri eeruvara rumwe anozoita kuti vanhu vanzwe kugadzikana. Iyi mhando yemutambo inonzwa inonzwika; 3, grey: yanga ichiti iro ruvara chena, chero ruvara runogona kuenderana grey, zvinoenderana nekuti unopfeka sei. Nekudaro, grey inogona zvakare kushandiswa nerakajeka girini, mudenga; 4. Dzvuku: girinhi rinogonawo kuenderana tsvuku. Ehe, inofanirwa kuenzaniswa neiyo tsvuku tsvuku, kwete iyo hombe tsvuku. Ruvara rwehunhu rwakasvibira uye rwutsvuku, irwo rwakasununguka uye rwakasikwa; 5, yero yero: kune girini, ine yakajeka yeyero pamwe chete, iri zvakare rinotaridzika zvakanaka. Mune iwo mavara manomwe emuraraungu, girini uye yero ndewemukati wepakati, uye ivo vanonzwa kupenya uye kufamba pamwe chete.
Zvimwe Zviratidzo Zvemifananidzo
Pashure: Capsule Bhodhoro PET Brown
Zvadaro: Capsule Bhodhoro PET Tsvuku
Capsule Bhodhoro PET Yero
Capsule Bhodhoro PET Transparent
Kamudzira Bhodhoro PET Nhema
Wuxi qianduo kuputira tekinoroji Co., Ltd. ndeimwe nyanzvi iri kuita dhizaini uye kugadzira marudzi ese ebhodhoro, senge kirimu bhodhoro, bhodhoro remishonga.